21 | décembre | 2008 | GAZETY_ADALADALA
Publié le 21/12/2008 par gazetyavylavitra	Andry RAJOELINA A.R : […] Misy zavatra maha samihafa be eo amin’ireo zavatra anankiroa ireo. Ka ny tenanay ankehitriny dia… Aoka izay angamba. Aoka izay angamba fa aleo apetraka ny fitsipi-dalao vaovao, mba ahafahana manantanteraka tsara an-tsakany sy an-davany ny asa izay ho ataonay eto amin’ity tananan’Antananarivo ity. Misy zavatra ho ambarako moa rehefa avy eo ary misy fitakiana ihany koa izay angatahina amin’ny fitondram-panjakana.
J3: Andriamatoa Ben’ny tanàna, misy fanontaniana ity, hivantambatana kely ihany aho hametraka azy an, tsy haiku raha tadidinao fa nisy fotoana nipetraka hoe mpanohitra ianao, tany amin’ny voalohandohany..voatery mihitsy ianao nanazava taty aoriana kely hoe “an, an, an tsy miaraka amin’ny fitondrana aho, tsy miaraka amin’ny mpanohitra, niverimberina matetitetika izay fanazavàna nentinao izay. Fa rehefa jerena indray ilay zava-misy Andriamatoa Ben’ny tanàna dia tsy tahaka ny vao mainka ve miantso ny fanjakana hamely kanonta eo ambony lohanao ilay hoe nanova staff ianao an, dia Andriamatoa Ny Hasina Andriamanjato, Ramatoa Elia Ravelomanantsoa…Izao indray ianao niaraka nijery tamin’ny mpanao pôlitika ilay hoe “Kianjana’ny demokrasia” sy miady ho an’ny fahalalahana an, dia nifarana moa tamin’ny hoe faniohana’ity FCD ity. A.R: Ny zavatra misy ankehitriny an, io izaho dia resy lahatra foana, ny zavatra asehoko ankehitriny dia mariky ny ho avy, satria tsy misy mihitsy olona, mariky ny fisokafana indrindra indrindra, mandainga izay olona tena ho afaka hampandroso an’ity tany sy fanjakana ity, na mampandroso ny fitantanana kaominina fotsiny aza, hoe tsy afaka misokatra, fa tonga dia hoe ianao irery ihany no hitantana an’azy eo. Mariky ny fitiavana, satria izahay dia misokatra, ary isaorako ireo olona izay tsara sitra-po nanaiky ihany koa nanolotra ny tenany hijoro hanasoa ny tananantsika izany.
J2 : Valin-teny ahoana moa Andriamatoa Ben’ny tanàna? Valin-teny mety hitranga mantsy dia mety hiteny ny fanjakana hoe tsy ara-dalàna ilay izy ka dia mipetraka eo ihany, na mety hamaly izy fa hamaly amin’ny hoe efa namely izahay. Sa endrika valin-teny ohatry ny ahoana ilay andrasanareo? A.R: Ny valin-teny andrasanay dia ny fanekeny ny fitakiana. Ary izaho mino fa tsy maintsy ho ekeny io fitakiana io, satria zavatra hetahetan’olona, hetahetam-bahoaka. Ka izany no tokony hotanterahany izany. Ka io izany ilay fe-potoana omenay, hoe amin’ny faha 13 janoary ho avy izao. Rehefa tsy misy valiny io, dia handray fepetra izahay manaraka izay
J: Fanontaniana teboka telo, Andriamatoa Ben’ny tanàna, ireto apetrako ireto. Ny voalohany dia ny hoe: Raha ity moa izany ianao antsoin’ny filoham-pirenena hitafa indray, tahaka ny nitranga tary aloha tary, hoa mipetraha tsara ianao Andriamatoa Ben’ny tanàna, hilamina ve ireo? Teboka faharoa: Raha vao nitranga ny hoe akatona ny VIVA dia maro be mihitsy ny olona niteniteny hoe “alaivo koa rangahy ny tany ery Anosipatrana a!”, ilay misy an’ilay MBS izany, nandalo tao an’eritreritrao tokoa ve izay hoe ndeha tokoa hiditra ami’izany lalana izany ary ny fahatelo: tena avela amin’izao tokoa ve Andriamatoa Ben’ny tanàna ny ery amin’ny digue izay nampimenomenona ny olona? A.R.: Voalohany indrindra aloha hoe raha misy ny fampiantsoana, dia ny fampiantsoana anie, marina fa efa betsaka izay resaka efa natao izay, betsaka izay fandaminana efa natao izay. Raha nareo ary dia nahatsapa angamba ny mponin’Antananarivo fa tena zanaka hendry ny tenanay tao anatin’izay herin-taona izay satria dia nanaiky foana. Fa ny fifampiresahana dia tsy manila mihitsy ny fitakiana izay atao. Izany hoe raha misy ny fifampiresahana dia tokony handinika ny fitakiana hoe ahoana no ahafahana manatanteraka ireo fitakiana ireo. Izay angamba ny avaliko an’izay. Faharoa mikasika ny MBS eny Anosipatrana. Marina dia marina tokoa fa tanin’ny CUA ny misy an’ny haino aman-jery iray ao Anosipatrana. Ny zavatra afaka lazaiko dia tsy any amin’ny hoe nandalo tany an-taina ve ny hanesorana na tsy hanesorana. Ny tantara no hitsara an’izany. Fa kosa tsy nandalo tao an-tsaina mihitsy ny hoe andeha hafindra eny koa ny VIVA satria malalaka be ilay toerana ao dia hoe afindra eto ambany eto koa ny VIVA. Malalaka be ao. Ary mbola misy toerana fanion-telony, faninefany koa ao mety mbola ifandimbiasan’ny Ben’ny tanàna izay mety hifandimby eto amin’ny tanàna’Antananarivo raha ohatra ka ilaina izany. Fa tsy tao anatin’ny sainay mihitsy izany satria izahay dia miaro ny fananan’ny tanàna. Fa tsy haka akory ny ahatongavanay eo amin’ny hoe haka ny tanànan’Antananarivo hoe tsy hoe haka ny fananan’ny tanànan’Antananarivo fa hiaro ny fananan’ny vahoaka, hiaro ny fananan’ny tanànan’Antananarivo. Izay ny zavatra mikasika an’iny. Mikasika an’ilay hoe tany, eny Amboditsiry izay malaza,eny fa hatrany ivelany aza dia betsaka ny olona miantso ahy mikasika an’izy io. Satria voalaza marina fa zone tampon io. Izany hoe tsy afaka totofana. Ary izay indrindra no nahatonga ahy ankehitriny raha ny tananan’Antananarivo izay tsy nanome alalana ny fanotofana an’izany tany misy eny amin’ny digue izany. Mipetraka izany ny fanontaniana hoe iza marina no tsy manara-dalàna eto amin’ny tany sy ny fanjakana ity.
J2: Iah, marina izany Ismael hoe misy ny fanambarana amin’izao fotoana izao ary tsy ny Ben’ny tanànan’Antananarivo ihany akory no nanao an’izay fanambarana izay. Tsara ihany ny maninry an’izay fa dia zavatra iarahana mipaika ny atao hoe fikambanana maro samihafa, ny syndicat io, ny mpandraharaha, ny antoko politika ihany koa eto amin’ny tany sy ny firenena manoloana indrindra ny zava-misy amin’izao fotoana izao. Mivaky toy izao izay fanambarana izay: “Ny zava-misy mitranga eto amin’ny firenena ankehitriny izay, izahay fikambanana ao amin’ny fiaraha-monim-pirenena: syndicats, mpandraharaha, antoko politika, ary fikambanana samihafa manao sonia etsy ambany dia manao izao fanambarana manaraka izao: Tafahoatra ireo tsy fanajana ny fahalalahana fototra eto amin’ny firenena malagasy ankehitriny. Voaosiosy ny demokrasia, noho izany dia potika tanteraka ny zo maha-olona ary tsy voahaja intsony ny hasina maha-Malagasy. Efa maro ireo fanambarana sy fitakiana, ary soso-kevitra nataon’ny mpiray tanindrazana. Maro rahateo koa ireo fifanarahana iraisam-pirenena nankatoavin’I Madagasikara mikasika izay kanefa zary … ireny rehetra ireny. Noho izany: Melohinay tanteraka ny fanaovana jadona eto amin’ny tany sy ny firenena. Momba ny tsy fahafahana mivory sy maneho hevitra an-kalalahana (liberté d’opinion), momba ny tsy fahafahana miteny amin’ny haino aman-jerim-panjakana hatrany amin’ny tsy miankina ihany koa (liberté d’expression); momba ny fanelingelenana ny asa fanaovan-gazety (liberté de presse); momba ny fanaovana mizana tsindriana ila eo amin’ny fampiharana ny lalana velona eto amin’ny tany sy ny fanjakana. Mazava fa ny mety ho vokatr’izany jadona izany dia fihenana na fanafoanana ny fifampitokisana eo amin’ny mpitondra sy ny vahoaka. Izany koa anefa dia miantraika eo amin’ny lafiny samihafa eo amin’ny raharaham-pirenena, indrindra eo amin’ny lafiny toe-karena sy eo amin’ny fiainam-bahoaka andavanandro. Iaraha-manaiky fa isika rehetra dia samy sarotiny amin’ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana eto amin’ity tanindrazana iombonana ity kanefa azo lazaina fa fanaparam-pahefana sy fanaovana jadona ny tsy famaritana mialoha ny toe-javatra izay lazaina hoe fihetsika na fiteny mampisavorovoro sy manakorontana ny saim-bahoaka. Ka manoloana izany, izahay dia manambara ampahibemaso ho ren’ny tany, ho ren-danitra fa tsy ekena intsony ny tsy fanajana na tsy fampiharana araka ny tokony ho izy ary koa ny tsy fiarovana ny demokrasia sy ny fahalalahana voalazan’ny lalam-panorenana sy ny fanambarana ny zon’olombelona. Koa noho izany dia takianay ny fanokafana ireo haino aman-jery rehetra nakatona noho ny antony lazaina fa manakorontana ny filaminam-bahoaka eto Madagasikara. Takianay ihany koa ny hahazoan’ny ankolafin-kery rehetra alalana hiteny sy haneho hevitra eo amin’io toerana io sy ny TVM. Tsy ekena intsony koa ny tsy fampitoviana lenta ny rehetra manoloana ny fampiharana ny zo sy ny lalàna. Aminay dia tsy tokony hisy mihitsy olona na antokon’olona na iza na iza ary na aiza na aiza izy ho ambonin’ny lalàna toy izay misy amin’izao fotoana izao fa raha mangataka alalana ny hafa mba ho afaka mandrakotra an’I Madagasikara eo amin’ny lafiny haino aman-jery dia tsy mahazo izany fa ny sasany kosa dia avela hanenika mora foana an’I Madagasikara na dia mifanohitra amin’ny lalàna aza izany ka lazaina fa fanandramana lava reny no ampiharina. Koa satria ny raharaham-pirenena tsy miandry ary ny fahalalahana fototra tsy azo hiadia-barotra, noho izany dia mitaky izahay nyfanatanterahana ireo fitakiana ireo tsy misy hatak’andro. Tompon’andraikitra isika vahoaka malagasy tsy vaky volo koa manentana ny rehetra handray ny andraikitra tandrify azy avy. Antananarivo, faha 17 desambra 2008.” Izay no vakin’ny fanambarana. Tsara ho fantatsika rehetra izany rehetra izany ary tsara ihany koa ny mampatsiahy fa dia tsy ny tananan’Antananarivo renivohitra irery akory no nanao an’izay fa fitakiana fototra niarahan’ny be sy ny maro ary miainga avy amin’ny ankolafin-kery maro samihafa manoloana ny tranga misy eto amin’ny firenena amin’izao fotoana izao. J: Iah, Andriamatoa Ben’ny tanànan’Antananarivo, raha vakiana ilay fanambarana izay niarahanao tamin’ireo olona samihafa niara-nivory taminao, déclaration politique ilay izy, izany hoe fanehoan-kevitra politika moa izany raha jereko amin’ny ankapobeny. Izay mihitsy ve ilay tena mety tamin’ity fanambarana ity. Ianao manao sonia ao anatiny hoe Ben’ny tanànan’Antananarivo, maire-n’I Tanà, Andry RAJOELINA. Hay, tsy nanao sonia ianao izany. Nanao sonia ianao fa tsotra ilay… Hay, izay no saika anontaniako, azafady, Andriamatoa Ben’ny tanàna, tonga dia tonga taoan-tsaiko ilay hoe Andry TGV no tokony tao anatiny izany hoe efa nahitsinao. Déclaration politique, izay ve ilay tena mety Andriamatoa Ben’ny tanàna tamin’ity fanambarana ity?
J: Ka ahoana Andriamatoa Ben’ny tanàna, mandeha izany izao ity fanambarana ity, aiza sy aiza avy no lalan’inyizany? A.R.: Io fanambarana io izany dia alefa eo anatrehan’ny any amin’ny fitondram-panjakana isan’isany. Any amin’ny… tsy ho tononiko eto tsirairay izany fa dia ny fitondram-panjakana rehetra dia samy voakasika ny mahakasika ny fitakiana dia hahazo an’izany avokoa.
Classé dans: fiaraha-monina, politika, tapatapany | Tagué: Andry RAJOELINA, demokrasia, fahalalahana, interview Andry RAJOELINA, VIVA | 4 Commentaires »	TAHIRY